August 2019 - ThutaStar
ဝမ်းနှင့်​ ပတ်​သက်​​သော​ရောဂါများ အတွက်​ အိမ်​တိုင်း​ဆောင်​ရန်​ ​ဆေးတစ်​လက်
August 21, 2019 Thuta Star 0
ဝမ်းနှင့်​ပတ်​သတ်​လျှင်​ ဝမ်းချုပ်​ခြင်းအ​ကြောင်းအရင်​သိရပါမယ်​။ ဝမ်းချုပ်​ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ?… ဝမ်းချုပ်ခြင်းဆိုတာ​​​​လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်က နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံတွေမတူညီတဲ့ အတွက် တစ်နေ့ကို ဘယ်နှကြိမ် ဝမ်းသွားမှ ပုံမှန်ဆိုတာတော့ ပြောဖို့အလွန်ခက်ပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်ခြင်းက အစာအိမ်စနစ်ကို ခက်ခဲစေပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်ခြင်းကြောင့် အစာအိမ်နာကျင်တာ အူလမ်းကြောင်းညစ်အားနာကျင်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်ခြင်း (၂)မျိုး ရှိပါတယ်။ နာတာရှည် ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့် […]
ခု​ခေတ်​ မြန်​မာ မိန်းက​လေးအများစု ဘာ​ကြောင့်​ ဘ၀ပျက်​သွားရသလဲ….?
ခု​ခေတ်​ မြန်​မာ မိန်းက​လေးအများစု ဘာ​ကြောင့်​ ဘ၀ပျက်​သွားရသလဲ ဆိုတာ သိ​စေချင်​လို့ ဒီ post ​လေးကို တင်​ရတာပါ… အစဆုံးဖတ်​ပြီး နှမချင်း ကိုယ်​ချင်းစာတယ်​ဆိုရင်​share လုပ်​​ပေးပါ “အရမ်းချစ်​တယ်​ အချစ်​ရယ်​” ​မောင့်​ကို တကယ်​ချစ်​တယ်​ ဆိုရင်​ “​မောင့်​ ဆန္ဒ လိုက်​​လျော ​ပေးပါ​နော်​ ” […]
သူရိယ၏ လမ်းခွဲသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ဆုအိမ့်စံ
ကျွန်မ ဆုအိမ့်စံနှင့် သူရိယသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ်ကျော် ကာလကတည်းက ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။ ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း နှစ်ဘက်မိဘများ၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် ၁၄.၂.၂၀၁၉ တွင် စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းခဲ့ကြပါသည်။ စေ့စပ်ပြီးနောက်ပိုင်း သူရိယအနေဖြင့် လက်ထပ်ရန် အတွက် အစီစဉ်များကို ရွှေ့ဆိုင်းပျက်ကွက်လာကာ သဘောထားများ ပြောင်းလဲ၍ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်း ဖျက်သိမ်းရန် […]
လမ်းခွဲလိုက်ကြပြီဖြစ်တဲ့ သူရိယနဲ့ဆုအိမ်စံ ….
နိုင်ငံကျော်အနုပညာစုံတွဲဖြစ်တဲ့ သူရိယနဲ့ ဆုအိမ်စံတို့စုံတွဲလေးဟာ ချစ်သူသူသက်တမ်းနှစ်နှစ်ကျော်မှာပဲသဘောထားမတိုက်ဆိုင်တော့လို့ လမ်းခွဲလိုက်တယ်လို့ မီဒီယာတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးမှ သရုပ်ဆောင်သူရိယကာ ပြောပြလာပါတယ်။ သိပ်မကြာမီကပဲ ဆုအိမ်စံနဲ့ သူရိယတို့စုံတွဲဟာနှစ်ဖက်မှ ရင်းနှီးသူများကိုဖိတ်ကြားကာ စေ့စပ်မင်္ဂလာပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။သရုပ်ဆောင်သူရိယက သူတို့နှစ်ဦးလမ်းခွဲလိုက်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုလိုပဲပြောပြလာပါတယ်။ “ကျနော်တို့နှစ်ဦးက နှစ်ဦးသဘောထားမတိုက်ဆိုငတော့လို့ လမ်းခွဲလိုက်တာပါ။ဒီထက်ဘာမှတော့ ကျနော်ဘားမှမပြောချင်ပါဖူး။ကျနော်ဆက်လက်ပြီး ပြုံိးိုင်အောင်ကြိုးစားသွားပါမယ်”လို့ အင်တာဗျူးမှာ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။သရုပ်ဆောင် သူရိယရဲ့အင်တာဗျူးဗီဒီယိုလေးကို အခုလိုပဲဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်… ရုပ်သံကြည့်ရန်….
မော်လမြိုင်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေက ဆိုလာနဲ့ မောင်းနှင်နိုင်မယ့် ကားတစ်စီးကို တီထွင် (ရုပ်သံ)
မော်လမြိုင်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေက ဆိုလာနဲ့ မောင်းနှင်နိုင်မယ့် ကားတစ်စီးကို တီထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ “ဒီကားကို လုပ်ဖို့ အချိန်အားဖြင့် (၃) လလောက် ကုန်ခဲ့ပါတယ်။ အသုံးစရိတ်ကတော့ သိန်း (၃၀) နီးပါး ကုန်ကျခဲ့ပြီး၊ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပြီးနေပြီးဖြစ်ပါတယ်” တဲ့။ ဗီဒီယိုကို အောက်မှာကြည့်ပါ မျောလမွိုငျ၊ […]
သေအံ့ဆဲဆဲဖြစ်နေပေမယ့် ညီမလေးကိုရအောင်ကယ်ခဲ့တဲ့ ( ၅ )နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်
စစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်ကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ မိသားစုနဲ့ဝေးကွာခဲ့ရတဲ့သူတွေ မိဘမဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သူတွေ ချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ သေကွဲ ရှင်ကွဲ ကွဲခဲ့ရတဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်။ ဒီအထဲမှာမှ ကမ္ဘာမီးလောင် သားကောင်ချနင်းဆိုသလိုပဲ လူတွေရဲ့ဖြူစင်တဲ့စိတ် ကြမ်းတမ်းယုတ်ညံ့တဲ့အတွင်းစိတ်တွေကို ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြားထဲမှာ ဟန်ဆောင်မှုကင်းစွာမြင်တွေ့ရမှာပါ။ ဆီးရီးယားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကတော့ အသက် ၅နှစ်သာရှိသေးပေမယ့် အနစ်နာခံစိတ်နဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်အပြည့်ရှိတဲ့ ကလေးငယ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ သူ့ရဲ့ညီမလေးအပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာကို မြင်တွေ့နိုင်မှာပါ။ Rihamလို့အမည်ရတဲ့ […]
လက်ရှိ ချစ်သူလေး နဲ့ အတိတ်ဘဝက ရေစက်ပါ ၊ မပါ ဆိုတာ သိနိုင်မယ့် အချက် (၄) ချက်..
ရေစက်သာပါလာရင် ကြံဖန်ပြီးဆုံရသလိုပဲ ရေစက်မပါရင် ကြံဖန်ပြီးလွဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလေး ကြားဖူးကြမှာပါ လူတိုင်းကရေစက်ပါလို့တွေ့ဆုံကြသလိုပဲ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ဆိုတာ လည်း အတိတ်ဘဝကဆုံဖူး ဆုတောင်းခဲ့ဖူးတဲ့ဆုတောင်းတွေကြောင့် အခုဘဝမှာလက်တွဲ ဖော်အနေနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ် ဒီလိုပဲ ကိုယ်တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ မဆုံဖူးပါပဲ မြင်မြင်ချင်းချစ်မိတဲ့အချစ်ဆိုတာ အတိတ်ဘဝကရှေးရေစက်ကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့အချစ်လို့ယုံ ကြည်ထားကြပါတယ်။ သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ရေစက်လားဆိုတာကို သိနိုင်တဲ့ အချက်လေးတွေရှိပါတယ်။ ၁။ ပထမဆုံးဆုံတဲ့အခါ […]
အမျိုးသားများ သဘောအကျဆုံး အမျိုးသမီးတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း ( ၅ ) ခု
အမျိုးသားများ သဘောအကျဆုံး အမျိုးသမီးတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း ( ၅ ) ခု … ဒါတွေဟုတ်ပါတယ်ဆိုတာ သင်ဝန်ခံလိုက်ပါတော့ … မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးကို မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း မြင်ရတွေ့ရရင် သဘောကျပါလား။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုမြင်တွေ့ရဖို့က ကံအရမ်းကောင်းမှဖြစ်မှာပါ …။ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ စိတ်ကူးလေးနဲ့ ဆက်တွေးကြည့်လို့ရလောက်အောင်လေးပဲ တစ်စွန်းတစ်စမြင်တွေ့ရတာက […]
အရက်မူးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ အီစီကလီဖုန်းပြောလေ့ရှိတဲ့ Ahn Jae Hyun
Goo Hye Sun ကတော့ သူမရဲ့ ဥပဒေအကြံပေးဘက်ကနေတစ်ဆင့် ကွာရှင်းရတဲ့ဖို့အတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းဖြစ်တဲ့ Ahn Jae Hyunရဲ့ အပြုအမူတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အသိပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Goo Hye Sunကတော့ သူမဘက်ကနေ ကွာရှင်းဖို့အတွက် တရားဝင် သဘောတူထားခြင်းလည်း မရှိသေးဘူးလို့ အခိုင်အမာပြောထားပါတယ်။ Goo […]
သစ္စာရှိရှိစောင့်နေတဲ့ ချစ်သူကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ မိုးအောင်ရင်
မိုးအောင်ရင်ဟာဆိုရင် အခုလက်ရှိမှာ ပရိသတ်တွေနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့နေပြီဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေရိုက်ကူးဖို့လည်း လက်မလည်အောင်အလုပ်တွေဆက်တိုက်လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ မိုးအောင်ရင်ကို အားပေးဖို့ စိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်စွာစောင့်ဆိုင်းနေကြပါပြီ။ မိုးအောင်ရင်က မကြာသေးမီက မီဒီယာတွေနဲ့အင်တာဗျူးမှာ အနုပညာအလုပ်ကိုအာရုံစိုက်နေကြောင်းနဲ့ သစ္စာရှိရှိစောင့်နေပေးတဲ့ချစ်သူကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားသွားပါတယ်။ မိုးအောင်ရင်က ကြားထဲမှာ ပရိသတ်တွေနဲ့ဝေးကွာပြီးအထဲရောက်သွားတဲ့အချိန်တွေရှိပေမယ့်အချစ်ကတော့ ပျောက်မသွားပါဘူးလို့ “မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော့်မှာရှိပါတယ်”လို့ ပြောထားပြီး အိမ်ထောင်ပြုဖို့တော့မရှိသေးဘူးလို့ “လောလောဆယ်တော့ […]